တရုတ် 450w Monocrystalline ဆိုလာပြား ထုတ်လုပ်သူများနှင့် တင်သွင်းသူများ - Rixing Electronics
450w Monocrystalline Solar Panel သည် 25 နှစ်အာမခံပါရှိသော၊ 1GW စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် modules များ၏လက်ရှိစွမ်းရည်ပါရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောဆိုလာပြား၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုအလွန်ထိရောက်ပြီးစျေးသက်သာသောမြေတွင်တပ်ဆင်ထားသောပုံဆောင်ခဲဆိုလာ module များသည်ဖောက်သည်များကိုသာလွန်ကောင်းမွန်သော photovoltaic နှင့်ပံ့ပိုးပေးသည် ထုတ်ကုန်များ၊ စနစ်ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်း ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်ရန် တောင်းဆိုပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုလာပြားများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ပျံ့နှံ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
2. လျှပ်စစ်ဖဲကြိုးခံနိုင်ရည်ကို လျှော့ချပြီး နောက်ဆုံးတွင် အလုံးစုံ module များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး ဟော့စပေါ့များကို ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသည်။
3. Multi-busbar နှင့် half cut technologies တို့ဖြင့် 166mm ဆီလီကွန် wafers များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် module series ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးမှုနည်းပညာကို ထိထိရောက်ရောက်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော module efficiency နှင့် power output ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
Module အမျိုးအစား QJM435-144H(9BB) QJM440-144H(9BB) QJM445-144H(9BB) QJM450-144H(9BB) QJM455-144H(9BB) QJM460-144H(9BB)
450W Monocrystalline ဆိုလာပြားကို အိမ်၊ ခြံ၊ စီးပွားရေး အဆောက်အဦ၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်း၊ စက်ရုံ...
450W Monocrystalline ဆိုလာပြားတွင် ဤစမ်းသပ်မှုများ ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 450W Monocrystalline ဆိုလာပြား၏ လက်မှတ်။
hot Tags:: 450w Monocrystalline ဆိုလာပြား၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ အစုလိုက်၊ ရောင်းအား၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ စျေးသက်သာ၊ အသစ်ဆုံး၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိရောက်မှု၊ သန့်ရှင်းသောစွမ်းအင်၊ လိုင်းပိတ်၊ ဂရစ်ဒ်ပေါ်မှ TUV၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ စတော့တွင်၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ CE၊ 25 နှစ်အာမခံ